Sellfy bụ ihe ngwọta eCommerce dị mfe iji maka ndị okike na-achọ ire ngwaahịa dijitalụ na anụ ahụ yana ndenye aha na ebipụta na-achọrọ - niile sitere na otu ụlọ ahịa. Ma ọ bụ eBooks, egwu, vidiyo, nkuzi, ngwa ahịa, ihe ndozi ụlọ, eserese, ma ọ bụ ụdị azụmaahịa ọ bụla ọzọ. Malite n'ụzọ dị mfe - Mepụta ụlọ ahịa na ọnụọgụ abụọ. Debanye aha, tinye ngwaahịa gị, hazie ụlọ ahịa gị ma ị dị ndụ. Na-eto eto - Jiri atụmatụ azụmaahịa arụnyere n'ime ka itolite ahịa na azụmaahịa gị.